IMorobha yakha imidlalo yeshashalazi enkulu kunazo zonke e-Afrika - i-Afrikhepri Fondation
En 2015, idolobha laseCasablanca eMorocco lizokwethula inkundla yemidlalo enkulu kunazo zonke e-Afrika nasemhlabeni wama-Arabhu. Owine kulo msebenzi ngumklami wezakhiwo odumile uChristian de Portzamparc (owazalelwa eCasablanca ngo-1944), ehlangana nomunye umakhi wezakhiwo zaseMorocan uRachid Andinglysi.
Le projekthi ezinkulu wokuvelela kakhulu iyokwakhiwa enhliziyweni Casablanca, phezu Indawo Mohammed V futhi uzobe elalinikezelwe ubuciko. Ukukhethwa lokuguqulwa amafemu wayeka ku uhlu abaklami imisebenzi kabani umnikelo omkhulu wesimanje izakhiwo Moroccan. Eziningana abaklami bodumo ezifana Frank Gehry, iNsalela Khoolaas noma Zaha naseHadidi nengxenye ngesinqumo sesikhalo ngokuthi umuzi Foundation Wabaphilayo Ubuciko kodwa amajaji umxhwele sobuhle bayo, ukusebenza kanye nokufinyeleleka iphrojekthi Portzamparc-Andaloussi.
Uhlelo lweZaha Hadid olungazange lugcinwe, ubukhulu balo kanye nomklamo walo aluxhunyiwe endaweni Mohammed V, isakhiwo sibhidliza izakhiwo ezungeze
Ikusasa leMoroccan yaseshashalazini lizosabalala endaweni engaba ngu-25.000 m² ezofaka phakathi:
indawo enkulu enkulu yezikhungo ze-1800
indawo yaseshashalazini yezindawo ze-600
izitolo, izindawo zokuziphatha, isitolo sezincwadi
indawo yokubukisa nezobuciko
Indlu yezindawo ze-1800
Liyindawo yamasiko eqiniso eyokwenza impilo yesikhungo sendawo idlule. Phakathi nomncintiswano wamazwe omhlaba, iphrojekthi ekhohliswa yi-aesthetics yayo kanye nokusebenza kwayo. Izakhiwo zayo eziyingqayizivele nenhle zihlanganisa nemvelo, ngokuhlonipha ukuthi umuzi unjani, usekelwe phakathi kwezinye izinto eziphakeme.
Imigoqo ngaphakathi kwesakhiwo: i-grandiose!
Ngokusho kobambisene nabo ababili, le midlalo entsha izozama ukubuyisela ukuhlonishwa kwayo endaweni yasePaul Mohamed V, okwamanje indawo lapho kunezikhungo ezinkulu ezakhiwa khona. U-Rachid Andaloussi uchaza ukuthi "lesi yisikhathi sokudala indawo entsha yale ndawo lapho i-casablancais izobona".
Abaphathi bephrojekthi banethemba lokuthi lesi sikhala esisha esinikezelwe ekudaleni sizoba uphawu nokubhekisela kwezakhiwo zangaleso sikhathi futhi kuyoba ukuziqhenya kwamaMoroccans. Kuzofika kunoma yikuphi, ukugcwalisa ukungabi namasiko kwamanje
Futhi izizwe eziyishumi nambili zakwa-Israyeli (ISIS-RA-EL) zazivela e-Afrika?